Gịnị bụ ahịa ndụ? Dabere na ndị na-akwado ahịa azụmaahịa anyị, ahịa ndụ bụ:… banyere otu ndị otu na-emekọ ihe na atụmanya yana ndị ahịa gafee ọkwa niile nke mmekọrịta ha na akara ha. Mkpakọrịta gị ọ na-enyere ma ọ bụ na-emebi akara gị? Ahịa na ire ahịa agbanweela nke ukwuu n'ime afọ 50 gara aga, ma hapụ naanị afọ iri gara aga. Ugba ahu adighi ka ya. Ọ bụghị ụzọ kwụ ọtọ - ahịa akpaaka na-eme ka